Paikady lehibe amin'ny marketing amin'ny mailaka | Martech Zone
Talata, Aprily 29, 2014 Alarobia, Aprily 30, 2014 Douglas Karr
Ny marketing amin'ny mailaka hatrany no fomba azo antoka hampifandray, hihazonana ary hisarihana ny mpanjifa. Na dia misy aza fanamby miditra ao anaty boaty, mbola misy ny paikady izay mamokatra valiny ho an'ireo ekipa mpivarotra mailaka mamokatra be.
The 2014 Fanisana ny indostrian'ny varotra Adestra / Econsultancy nohadihadiana tamin'ny mpivarotra dizitaly niisa 1,100 ary fantaro hoe iza avy ireo toetra manakiana amin'ny famoronana marketing amin'ny mailaka nofinofy ekipa.
Misy statistika tsara hanohanana ny anao paikady marketing amin'ny mailaka isaky ny infographic:
83% amin'ny orinasa omeo isa ny marketing amin'ny mailaka raha tsara na tsara amin'ny famerenam-bola.
63% ho an'ny mpivarotra mandany adiny roa mahery amin'ny famolavolana sy atiny fa fotsiny 17% mandany adiny roa farafahakeliny amin'ny fanatsarana.
49% ho an'ny mpivarotra hevero fa tsy nahomby ny fampiharana ny automatisation marketing.
47% ho an'ny mpivarotra manatsara ny mailaka ho an'ny finday fa ny 61% dia manana fototra or tsy-misy, paikady finday.
Tags: mailakaautomation emailfomba fanao tsara amin'ny mailakafanatsarana ny mailakafanatsarana ny mailakatatitra momba ny mailakaekipa mailakamailaka findaymarketing amin'ny mailaka findayfinday-barotra
Fampiasana paikady marketing amin'ny atiny amin'ny mailaka B2B
Apr 30, 2014 ao amin'ny 9: PM PM
Ny mailaka dia mijanona ho fitaovana marketing matanjaka ho an'ny finday. Miaraka amin'ny fitomboan'ny fampiasana finday avo lenta manerana an'i Azia sy amin'izao tontolo izao, ary manana fotoana volamena ny mpivarotra. Iray izay tsy azontsika atao ambanin-javatra.